Ciidamada badda Soomaaliya oo u dabaaldegay 51 sano guuradoodii (SAWIRO) – SBC
Ciidamada badda Soomaaliya oo u dabaaldegay 51 sano guuradoodii (SAWIRO)
Xaflad balaaran oo ku aadaneyd xuska sanadguuradii 51-aad ee ka soo wareegtey aaasaaskii ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtey magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro, & taliyeyaasha qaybaha ciidamada.
Cutubto ka tirsan ciidamadan oo muujinaya inay u diyaar yihiin dib u hawlgalkooda mudo sanooyin ah ka dib ayaa waxay ku soo bandigeen munaasabadan gaada kacayaar halka kuwa kale oo ku qalabeysan doonyaha dheereeya iyo hub kala duwan ayaa iyaguna ku sameeyey socod xawaare ah xeebta Sugunto Liido ee lagu qabtey munaasabadan.
Taliyaha ciidamada Badda Soomaaliyeed Admiral Faarax Axmed Cumar “Faarax Qare” oo khudbd ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in ciidamadu ay soo mareen mudo shan sano ah oo ay soo mareen daruufo aad u adag, balse maanta ay marayaan heer aad u wanaagsan oo ay u diyaar yihiin sidii ay u difici lahaayeen badda Soomaaliyeed, waxaa kaloo oo uu sheegay in qalabkoodii intii la awooday la diyaariyey.
Taliyeyaha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed Gen.Shariif Sheekhuna Maye & Abaanduulaha ciidamada xooga dalka Gen.C/kariin Yuusuf Aaden (Dhegobadan) oo iyaguna munaasabadan hadal ka jeediyey ayaa si weyn ugu hambalyeeyey ciidamada badda Soomaaliyeed iyo taliyahooda munaabsadaban 51 sano guurada aasaaskooda, waxaana ay sheegeen inay la socdaan daruufaha iyo xaaladaha qalafsan ee ay ku shaqeynayaan, iyagoo u diyaar ah inay dalkooda difaacaan.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/kariin Maxamuud Xaaji Fiqi oo isaguna munaasabadan hadal ka jeediyey ayaa wuxuu u diyay hambalyo guud ahaan ciidamada Badda Soomaaliyeed, waxaana uu muujiyey in dhibaatada ka taagan baddaha Soomaaliyeed sida burcad badeeda wax looga qaban karo halwgalinta iyo taageerada ciidamad badda Soomaaliyeed.
Taliye Faarax Qare
Wasiir Fiqi wuxuu munaasabada ka cadeeyey siyaasada xukuumada uu wasiirka ka yahay ku doonayso inay mudada afarta sano ah ee soo socoto dib ugu soo dhisayso ciidamada badda Soomaaliyed.
SBC News Muqdisho